Madaxweyne Trump Oo Booqday Qasaaraha Uu Geystay Dabki Ugu Waxyeellada Badnaa Oo Mareykan Ka Dhaca. – somalilandtoday.com
Madaxweyne Trump Oo Booqday Qasaaraha Uu Geystay Dabki Ugu Waxyeellada Badnaa Oo Mareykan Ka Dhaca.
(SLT-Washington)-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray California si uu u soo indha indheeyo qasaaraha ka dhashay dabka ka kacay gobolkaasi oo ay ku dhinteen 71 qof.
Wararku waxaa kale oo ay sheegayaan 1,000 qof oo kale in la la’yahay iyada oo mas’uuliyiinta gobolkaasi ay sheegeen tirada dadka dhintay iyo kuwa la la’yahayba ay isbedbeddeli karto.
Madaxweyne Trump oo magaalada Paradise uu dabka qasaaraha badan u geystay ka hadlay ayaa wuxuu ammaanay maamulka gobolka iyo shaqaalaha ku howlan baadi goobka dadka la la’yahay.
Wuxuuna Trump intaa ku daray “iney cidna ku fikirin iney sidan wax u dhacayaan, waana wax laga naxo waxaanna ku dadaaleynaa dadka ay masiibada ku habsatay sidi aan u caawin lahayn”.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionTrump oo booqday magaalada Paradise
“Waxaanna rajeeynayaa ayuu yiri masiibo noocani iney markale na soo marin, maadaamaa uu dabkan uu yahay kii ugu qasaaraha badnaa ee abid na soo mara”.
Dab kan la mid ah oo ka dhacay Los Angeles oo ay seddex qof ku dhinteen waxaa lagu guuleystay in mudda gaaban lagu xakameeyo.
Toddobaadka soo socdana waxaa la saadaaliyey ayuu yiri roobab xooggan iney ka di’i karaan deegaannada uu dabku ku dhuftay marka maadaamaa ay daadad ka dhalan karaan waa in taxaddar weyn la sameeyaa maadaamaa ay dhirta inteeda badneyd ay gubatay.
Howlaha gurmadka waxaa ka qayb qaadan hayo ciidamo tira badan oo shaqaalaha gurmadka ka barbar shaqeeynaya.
Dadka dabka ku dhintay oo ay tiradoodu mareyso 71 qof ayaa waxaa Jimcihi seddex qof oo kale oo meyd ah oo dabka ku gubtay laga soo saaray dhismayaal ku gubtay magaalada Paradise.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionEeyda oo loo adeegsanayo baadi goobka dadka la la’yahay
dadka marka hore la sheegay in la la’yahay oo lagu sheegay 631 qof 24 saac gudaheed waxay tirada dadka la la’yahay gaartay 1,011.
Inkasta oo tirada dadka la la’yahay iyo kuwa dhintayba ay isbed beddeli karto.
Image captionKhariidad Muujineyso Goobaha uu dabku ku dhuftay
Shaqaalaha dagaalka kula jira xakameynta dabka ayaa waxay sheegeen in si buuxda loo xakameyn karo dabka gabi ahaanti ay socon karto ilaa iyo dabayaaqada bishan.
Madaxweynaha wuxuu la kulmay dadka dabka ka badbaaday iyo shaqaalaha dab damiska ku howlan.
Telefishiinka Fox News oo madaxweynaha weydiiyey dabka inuu degdeg uu ku faafo iney ka qayb qaadatay isbeddelka cimilada ayaa wuxuu ku jawaabay “waa laga yaabaa inuu saameyn yar uu ku lahaa balse dhibka ugu weyn wuxuu ka yimid sida loo maareeyey”.
Maamulaha California Jerry Brown, oo dhaleeceeyey hadalka madaxweynaha ka soo yeeray oo madaxweynaha soo dhaweeyey ayaa wuxuu sheegay “hadda waxaa loo baahan yahay iney tahay inaan iska kaashanno sidii aan u badbaadin laheen shacabka California ee ay masiibada ku habsatay”.
Roslyn Roberts, oo ka mid ah dadka guri uu kaga gubtay dabka California ka kacay ayaa waxay wakaaladda wararka Reuters ayaa waxay sheegtay “hadalka madaxaweynaha ee sheegaya iney maamul xumo dhinaca deegaanka ay ka timid ay tahay mid aan la qaadan karin kumannaan iyo kumannaan guri ayaa ku burburay dabkaasi dadka guriyahaa ku noolaa ee lafahooda u badbaaday ee ku sugan teendhooyinka waxqabad ayey u baahan yihiine hadal raqiis ah ah uma baahna”